Inkqubo entsha yomda weplastiki iyeza!
Isithethi seKhomishini yoPhuhliso kuZwelonke kunye noHlaziyo uMeng Wei uthe ngomhla we-19 ukuba ngowama-2020, ilizwe lam lizakukhokela ekunqandeni nasekuthinteleni imveliso, ukuthengiswa kunye nokusetyenziswa kwemveliso ezithile zeplastiki kwezinye iingingqi neendawo. Uye wathi ngokwe "Iimbono kuQeqesho oluQhubekayo ...
Ulondolozo lwezixhobo zeNtlakohlaza
Ndwendwe elimnandi likaChengda Oomatshini, molo Iholide yonyaka yoMbhiyozo weNtwasahlobo isondela. Ukuze kuqinisekiswe ukuba umatshini wakho indebe iphepha unako ukusebenza ngokwesiqhelo emva kokuba iholide, thina ngokwenjenje ukukhumbuza ukuba wenze oku kulandelayo: 1: Kuba umatshini Chengda iphepha indebe eye isetyenziselwa ngaphezu ...
Uyilo loNyaka oMtsha, nyusa itekhnoloji
Ukuze ubonelele ngcono iinkampani zemveliso yesikhongozeli sephepha kunye neemveliso ezingqanyaniswe nobuchwephesha bokwenza umatshini wanamhlanje, i-Haining Chengda Machinery Co., Ltd. iqalile ukuphucula lonke uthotho lwamaphepha okwenza oomatshini. Umatshini yokubumba ekuveliseni ngoku ha ...
Chengda kabini-umaleko iphepha umatshini iphepha emangazayo Packaging World (Shanghai) Expo
KwiZiko laseShanghai elitsha leMiboniso yeHlabathi liza kutshintshela i-Expo ye-Expo ye-2019 ngo-Novemba ngo-25 ukuya ku-28, ngo-2019, umnquba we-Haining Chengda Machinery Co., Ltd. yayingqongwe ziindwendwe ezivela ekhaya nakwamanye amazwe yonke imihla. Abantu baqhubekile babelana ngeendaba zamva nje eziziswe ngoomatshini bakaChengda. Ifoto yeqela o ...
Umboniso we-SWOP 2019
I-Biennial World of Packaging (i-Shanghai) Exhibition (i-SWOP) izakubanjwa ukusuka nge-25 kaNovemba ukuya kwi-28. Ayisiyiqonga elinempembelelo kuphela ekuboniseni iimveliso, kodwa ikwalithuba elihle lokutshintshiselana ngobuchule kushishino lokupakisha. Masidibane e Shanghai New International E ...
Lo matshini iphepha indebe kuphuhliswa ukuya mkhuba ukhuseleko lokusingqongileyo
Kule mihla, ukhuselo lokusingqongileyo luye lwaba yimfashini, kwaye ishishini lokhuselo lokusingqongileyo nalo liyaphuhlisa. Olunye lolona tshintsho lubonakalayo kufutshane nobomi babantu kukunyuka kokufakwa kwephepha kunye nemizi-mveliso yesikhongozeli sephepha. Kukho iingxaki ezinzulu kwimveliso ...
Yintoni ifoyile yealuminiyam edityanisiweyo
Ndiyakholelwa ukuba wonke umntu akasaziwa ngokufakwa kwephepha kwityhubhu yephepha, kwaye iityhubhu zamaphepha zihlala zisetyenziswa kubomi bemihla ngemihla. Ngophuhliso lwephepha lokubumba ityhubhu, kukho iintlobo ezininzi nangaphezulu zeetyhubhu zephepha. Phakathi kwabo, iityhubhu iphepha ngefoyile ye-aluminiyam yenye typ kakhulu ethandwa ...
Egypt Exhibition ngoSeptemba 2018
Igama lomboniso: I-Egypt Packaging kunye nePrint Exhibition Booth number: R3-3- Hall 1B Time: September 10-12, 2018 Location: Cairo Convention and Exhibition Centre, Egypt
Itekhnoloji ekhokelayo, umba wamanye amazwe
Kutshanje, ngokuvela kweelori ezininzi zekhonteyina, i-SMD-90 eveliswe yiHaining Chengda Machinery Co., Ltd., ngesantya esiphakathi kwe-120 ngomzuzu, yaphinda yaya phesheya yathumela eGrisi, eUkraine naseAlgeria. Kwiminyaka yakutshanje, inkampani yethu ngokuqhubekekayo yazisa ukuphakama kwengqondo ...
Sizakubona eWuhan ngoSeptemba
Thina, Haining Chengda Machinery Co., Ltd. inxaxheba 19 China International Mechanical and Electrical Products Expo e Wuhan ukususela Septemba 06 ukuya 09, 2018. Inombolo yethu mboniso: Hall B4 4T33. Kulo mboniso, asiyi kwenza kuphela i-130 / min yesantya esisezantsi somatshini wendebe yephepha ...
Athini “amathuba” kunye "nemiceli mngeni" ejongene nomzi mveliso wokupakisha kubhubhane wangoku?
Umnyhadala weNtwasahlobo lixesha elihle lokudibana kosapho. Ukonwabela ixesha elifudumeleyo lesidlo kunye nosapho kunye nabahlobo kunyanzelekile ukuba kuzise ukuqhushumba kweendibano ezinkulu, eziphakathi nezincinci kunye namaqela esidlo kwilizwe liphela. Ngokuqinisekileyo esi sisibonelelo esihle seshishini lokutya kunye nevenkile ...
Ubhubhane aluchaphazeli ukuthunyelwa ngaphandle komatshini weChengda
I-2020-03-02 lusuku olungaqhelekanga lokuHaining Chengda Machinery Co., Ltd. kwiintsuku nje ezili-10 emva kokuqalisa kwakhona umsebenzi, ukuthunyelwa koomatshini bokufaka amaphepha abaninzi kwagqitywa ngempumelelo. Iziphumo zobhubhane kwinkampani zilinganiselwe. Oku ikakhulu kungenxa yeenkokheli zenkampani ezihlala ...